एउटा दर्दनाक कथा – आखीर नारीको जिन्दगी कहिले सम्म यसरी लुटिइन्छ ? – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
मेरो आडैको सीट खाली छ । म रात्री बसमा यात्रा गर्दैछु । यत्तिकैमा एक युवती आएर मेरो आडैको सिटमा बस्छिन् । उनको अनुहार पुरै पछ्यौरीले छोपेकी छिन । हजुर पनि शहर सम्म नै पुग्ने हो ? मैले प्रश्न तेर्साइहालेँ । उनी भस्किदै सानो स्वरमा भनिन् – हनुर । मैले फेरी सोधेँ कहाँबाट आउनुभाको नि ? सायद उनी बोल्न चाहिनन् क्यारे । केहि जवाफ आएन । म पनि बोल्न उचित ठानिन । झ्यालबाट यताउति हेरिरहेँ । तर पनि मनमा उनीप्रतिको कैतुहलताले सताइरह्यो । करिब दुइ घण्टाको यात्रापछि फेरी बस एक ठाउँमा अडियो । यसपाली भने एक हुल प्रहरी बसभित्र छिरे । अनी मेरो आडैमा बसेकी ति युवतिलाई लिएर गए । बसबाट बाहिर निस्कीदै गर्दा देखेको उनको आधा अनुहार सर्लक्कै जलेको थियो । म झन सोच मग्न भएँ आखीर पुलिसले किन लगेका होलान् ति युवतिलाई ?